चापर्वको समयमा कसरी आफू र आफन्तलाई राम्रो र स्वादिलो खाना खुवाउने ? जानकारी लिनुहोस - सुदूरखबर डटकम
चापर्वको समयमा कसरी आफू र आफन्तलाई राम्रो र स्वादिलो खाना खुवाउने ? जानकारी लिनुहोस
चाडपर्व भन्ने वित्तिकै मिठो खाने, राम्रो लगाउने, साथीभाई भेट्ने र मिठा खानेकुरा खाने गरिन्छ। पर्वहरुमा हामी मासुका धेरै परिकार प्रयोग गर्छौं। संसारभर माछा, मासु, अन्डा र दुग्ध पदार्थलाई पोषिलो आहारका रुपमा प्रयोग गरिन्छ। शरीरलाई चाहिने प्रोटिनको श्रोतका रुपमा मासुलाई लिइन्छ। प्रोटिनले शरीर निर्माणमा मद्धत गर्छ।
मासु खान मिल्छ भनेर सधैं मासुको प्रयोग गर्नु हुँदैन। पुर्ण स्वस्थ मानिसले मासु खान मिल्छ। तर, दैनिक मासुको प्रयोग गरेमा स्वस्थ मानिस पनि बिरामी हुन्छ। रोग लागेकाले त खानु नै भएन। मासुले कब्जियत, मोटोपन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्टेरोल, टाउको दुख्ने जस्ता समस्या आउँछ। तसर्थ मासु नखानु नै लाभदायक हुन्छ। त्यसो त प्रोटिनको श्रोत मासु मात्रै होइन, दाल र गेडागुडी (भट्मास, मास, चना, रहर आदि)मा पनि पाइन्छ। त्यसमा पनि मासुमा भन्दा भटमासमा बढी प्रोटिन हुन्छ।
तीन बराबर आहार भन्नाले एक भाग अन्न, (अप्रशोधित र सम्भव भएसम्म कम प्रशोधित खाद्य पदार्थहरु जस्तै नफलेको चामल, चोकरसहितको पिठोबाट बनेका भात, रोटी, ढिंडो, च्याँख्ला आदि पूर्ण अन्नबाट पकाएर बन्ने परिकार), एक भाग हरियो तरकारी पकाइएको र एक भाग काँचो सलाद फलफुलको बराबर मिश्रण हो।
हाम्रो शरीर बृद्धि गर्न चाहिने क्याल्सियम र प्रोटिन दाल, गेडागुडि, सागसब्जी र फलफुलमा प्रसस्त पाइन्छ भने मासु नै किन खानु पर्यो र ? किन अरुको हत्या गरेर मासु खाने ? स्वास्थ्यलाई सामान्य राख्न मासु नखाएकै राम्रो। अझ स्वास्थ्य समस्या भएका, जीर्ण रोग लागेका, यूरिक एसिड भएका, अधिक मोटोपन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्टेरोल, टाउको दुखाई, दम आदि समस्या भएकाले त मासु छुनै हुँदैन।